Saxeexa cusub ee Apple ayaa daryeeli doona caafimaadkeena xitaa inbadan | Waxaan ka socdaa mac
Mar dambe ma garanayo inta jeer ee aan ka hadlay waxtarrada ay Apple Watch u leedahay caafimaadkeenna. Waa aalad in kasta oo ay yar tahay, haddana samaynaysa waxyaabo aad u waaweyn oo faa iidooyin badan u leh dadka isticmaala iyo shirkadda lafteeda. Naga ilaali adoo kormeeraya wadnaheena, oksijiinka dhiigaaga iyo ogaanshaha dhicitaankeena iyo waxyaabo kale oo badan. Laakiin shirkaddu wax badan ayey rabtaa waxayna ku tusaysaa saxiixa ugu dambeeyay. Wuxuu shaqaalaysiiyey khabiir ku takhasusay cudurada wadnaha si uu gacan uga geysto hirgelinta tikniyoolajiyadda cusub ee daryeelka caafimaadka aaladaha Apple.
Sida looga hadlay gudaha My HealthyApple, shirkaddu waxay shaqaalaysiisay "dhakhtar sare oo wadnaha ah oo khibrad hore u leh wax soo saarka caafimaadka iyo tikniyoolajiyadda." Dhakhtarka wadnaha wuxuu lashaqeyn doonaa kooxo kaladuwan sidii loo aqoonsan lahaa meelaha muhiimka ah ee diirada la saarayo iyadoo la tixgelinayo wax soo saarka iyo teknoolojiyada Apple iyo qeexida horumarinta fikradaha alaabada cusub.
Xayeysiinta shaqada waxaa lagu daabacay shabakada shaqada-bulshada ee LinkedIn halkaas oo aad ka heli karto shuruudaha ay Apple ku muujisay musharraxa saxda ah. Sidan ayaa loo codsaday inuu haysto khibrad qoto dheer oo ku saabsan wadnaha iyo wixii ka sarreeya, sidoo kale waayo-aragnimo hore oo ku saabsan alaabada caafimaadka iyo tikniyoolajiyadda. Waxyaabaha la doorbidayo ee nidaamsan ee caafimaad iyo / ama alaabada caafimaadka dhijitaalka ah. Waxaa sidoo kale loo tixgelin doonaa muuqaal wanaagsan haddii qofka ay khusayso uu khibrad u leeyahay hannaanka horumarinta bukaan socodka ee alaabooyinka caafimaadka ee nidaamsan, oo ay ku jiraan daraasadaha caafimaad ee muhiimka ah. Xiriir xoog leh iyo xirfado abaabul, karti u wada shaqeynta dad badan oo ka tirsan kooxda iyo khabiiro.
Way cadahay in boostada loogu talagalay in lagu hagaajiyo tayada ECG iyo qiyaasta garaaca wadnaha ee Apple Watch. Laakiin waxaan u maleyneynaa in shirkaddu sidoo kale ay isku dayeyso inay soo saarto barnaamij cusub oo loogu talagalay Apple Watch arrimaha wadnaha. Waqtigan xaadirka ah waxaan ognahay in qalabku uu badbaadiyay nolosha dadka isticmaala badan, oo ay ku jiraan xubin ka tirsan kooxdan Soy de Mac. Marka wax kasta oo lagu horumarinayo arimahan, soo dhawow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Saxeexa cusub ee Apple ayaa xitaa daryeel dheeri ah ka bixin doona caafimaadkeena